Zavakanto sy fialamboly | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ahoana ny fomba hantsaka amam-borona? Fomba vitsivitsy ho an'ny mpanakanto maniry
Ny hazo serizy vorona dia lehibe kokoa. Indraindray mahatratra 12 metatra ny haavony. Amin'ny ankapobeny ny serizy vorona dia maniry eo akaikin'ny moron'ny farihy sy renirano. Hita any anaty ala mando koa izy io. Voninkazo ...
Dihy Mazurka: fiaviany sy famaritana
Ny dihy Mazurka dia niseho tany Polonina. Any no iantsoana azy hafa kely. "Mazur" no iantsoana azy. Haingam-pandeha sy matanjaka be ity dihy ity. Ny tanindrazany dia Mazovia, toerana onenan'ny olona izay miantso ny tenany hoe Mazuras. ...
Aldanov, "Tetezan'ny devoly". Famintinana sy endri-javatra ao amin'ilay tantara
Hatramin'ny andron'ny Empira dia nalaza tamin'ny mpanoratra sy poeta nataony i Russia. Ny sanganasa tsy voatanisa, izay nanjary kilasika dia tsy eto amin'ny firenentsika ihany, fa manerantany dia mamela antsika hirehareha ara-drariny amin'ny kolontsaina ...
Tadidio ny tarika rock malaza 80
Ny vatolampy valo-polo taona dia miavaka amin'ny zava-misy fa ny karazana vaovao dia mahatratra ny fahombiazana lehibe indrindra, ary ny fitarihan'ny taona lasa dia manjavona mankany aoriana. Tarika rock tamin'ny taona 80, noforonin'ny tanora mpitendry zavamaneno noho ny faniriana hanambara mazava momba ny ...
Ilay mpilalao Lyudmila Ivanova: tantaram-piainana, fiainana manokana
Lyudmila Ivanova dia mpilalao sarimihetsika izay mendrika hajaina ny tantaram-piainany, nanomboka be dia be ny asany, saingy nandresy ny zava-drehetra izy ary nahatratra izay notadiaviny hatramin'ny fahazazany. Teraka tany Moskoa ...
Ilay mpilalao sarimihetsika Evgeny Kindinov: biography, fiainana manokana, sary
Evgeny Kindinov, izay eo alohanao izao ny sariny, tamin'ny andron'ny sovietika dia vehivavy maro no nijaly noho ny fitiavany azy tsy misy valiny. Tena tsara tarehy ilay mpilalao tamin'ny fahatanorany, saingy ny ...
Hoso-doko hosodoko. Ny teknikan'ny hosodoko Flemish. Sekolin'ny sary hosodoko
Ny kanto klasika, mifanohitra amin'ny fironana avant-garde maoderina, dia nahazo ny fon'ny mpanatrika hatrany. Iray amin'ireo fientanam-po mamirapiratra sy mahery indrindra tavela ho an'izay sendra ny asan'ny artista holandey tany am-boalohany. Flemish ...
Firy sy symphônia no nosoratan'i Tchaikovsky? Tsy mihoatra na ambany, fa fito. Ary izay ihany - mamirapiratra izy ireo
Pyotr Ilyich Tchaikovsky - mpamoron-kira rosiana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny mozikany dia miavaka amin'ny fandokoana, ny tantaram-pitiavana ary ny harena manan-danja amin'ny mozika. Misaotra an'i PI Tchaikovsky, ny zavakanto mozikan'i Rosia dia nahatratra avo indrindra. Mandritra izany…
Mpilalao sarimihetsika "Fast and Furious 7", na Ahoana ny fomba nanamboarana ny sarimihetsika raha tsy nisy an'i Paul Walker
Ireo mpihetsiketsika amin'ilay sarimihetsika "Fast and Furious 7" sy ireo ekipa mpiasan'ny tetikasa tamin'ny Novambra 2013 dia talanjona fa ilay mpilalao sarimihetsika malaza ao amin'ny franchise malaza Paul Walker dia maty tsy nahavita ny asa ...
Vondron Mirage: tantara, sary, sary. Firafitra antitra taloha
Ao amin'ny lahatsoratra anio, dia ho fantatsika ilay fiaraha-miasa malaza taloha, noforonina tamin'ny andron'ny USSR ary izay nalaza be tamin'ny fahalalahan'ny tanindrazantsika nandritra ny vanim-potoana Perestroika. Ity ny vondrona Mirage. Biography, ...
Sarimihetsika serial "Zanakalahin'ny Rain'ny Firenena": mpilalao sarimihetsika
Tamin'ny 2013, taorian'ny herintaona sy tapany fanandramana, fakana sary ary fanovana, sanganasa niarahan'ny tompo avy any Russia, Belarus ary Ukraine - ny sarimihetsika "The Son of the Father of Nations". Ity andiany ity dia nanjary fanandramana hafa hijery ...
Moskoa, Theatre Theatre: poster, tapakila, sary sy hevitra
Tena tia an'ity dingana ity i Moskoa. Ny Theatre isan-karazany nandritra ny taona maro nisian'ny fisiany dia nanolotra fihaonana mahaliana marobe amin'ireo mponina sy vahinin'ny renivohitra. Miseho an-tsehatra ny tarika teatra sy tarika rock ...
Lyudmila Zorina: tantara momba ny fiainana sy ny fiainana manokana an'ny mpilalao sarimihetsika (sary)
Ny tantaram-piainan'i Lyudmila Zorina dia manomboka amin'ny taona talohan'ny ady. Teraka roa volana talohan'ny nanombohan'ny Ady Lehibe Tia Tanindrazana izy, tamin'ny 1 Mey 1941, tao amin'ny tanàna mitondra ny anarana hoe Saratov. Nanomboka tamin'ny fahatanorany, zazavavy ...
Inona ny lokon'ny loko volamena miaraka amin'ny: endri-javatra, hevitra ary tolo-kevitra
Ny volamena dia raisina ho toy ny iray amin'ireo metaly sarobidy indrindra eto ambonin'ny planetantsika. Mandia oksidra kely indrindra izy ary maharitra mandrakizay ny famirapiratany. Noho izany, ny rendrarendra toy izany dia mety hahatratra ny ...
Inona no asa nosoratan'i Marshak S. Ya nandritra ny androm-piainany?
Ny anaran'i Marshak Samuil Yakovlevich dia fantatra erak'izao tontolo izao. Taranaka maherin'ny iray no nihalehibe tamin'ny sanganasa mahafinaritra nataon'ny mpanoratra. Amin'ny ankapobeny, fantatry ny rehetra amin'ny maha mpanoratra an-dry zareo Marshak, fa i Samuil Yakovlevich kosa mbola ...
Fazu Aliyeva: tononkalo farany an'ny poeta lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-20
Tamin'ny andro voalohan'ny 2016 vaovao, maty ilay poeta vavy mpanoratra Avar sy Sovietika manana anarana hafahafa sy tsy mahazatra ho an'ny Slavia - Fazu Aliyev - maty. Ny tantaram-piainan'ity vehivavy miavaka ity dia manompo ...
Inona no atao hoe angano? Ny dikan'ilay teny hoe "angano"
Impiry isika no maheno izao teny cliché sy fitenenana izao toy ny "fahaterahan'ny angano", nefa tsy mieritreritra hoe inona ny angano, raha ny tena izy. Raha mitodika any amin'ny loharano voalohany isika, dia avy amin'ny teny latina ny teny legenda. Ka ...
Ny tantara mystika "The Queen of Spades". Ny atin'ny tantara, ny mpilalao fototra
Fientanentanana sy fitiavam-bola, faniriana hamitaka ny lahatra, hiakatra amin'ny avo tsy azo tratrarina ao anatin'ny indray mipy monja - ireo no hetahetan'ny mpiorina amin'ilay tantara - ny injeniera Herman. Aorian'izay dia hasehon'i Dostoevsky io fientanam-po io mandoro lavenona ny olona iray, indrindra ...
Ny Strugatsky mirahalahy "Kid": famintinana sy olana amin'ny asa
"The Kid" dia tantara foronina noforonina nataon'i Arkady sy Boris Strugatsky, iray amin'ireo sangan'asan'ny mpanoratra sovietika. Navoaka tamin'ny taona 1971 tao amin'ny magazine Aurora. Inona ny hevitra napetraka ...
Ny toetra psikolojia an'i Pechorin
"Hero of Our Time" no tantara ara-psikolojika voalohany eto amin'ny firenentsika, izay nanehoan'i Lermontov, tamin'ny famakafakana ny fihetsika sy ny eritreritr'ilay mahery fo, ny mpamaky azy. Na eo aza izany, ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 165 Next Page